Maha Chai Delivery Menu - Mandalay | Order Online
Show All Most Popular Appetizers Salads Soups Stir Fried Traditional Thai Curry Seafood Fish Vegetables Lunch Special Rice Menu Special Noodle Menu Shrimp Paste Fried Rice
Lunch Special Rice Menu
Special Noodle Menu
No.30, 27th Street, Bet: 68th & 69th Street, Mandalay, MM Chanayethazan
Sunday08:00 - 19:30
Saturday08:00 - 19:30
Sunday8 AM - 19:30
Monday8 AM - 19:30
Tuesday8 AM - 19:30
Wednesday8 AM - 19:30
Thursday8 AM - 19:30
Friday8 AM - 19:30
Saturday8 AM - 19:30
N6. Kwy Tei Yw Pad See Ew (ကွေ့သယိုဖက်စီးယူ) (ကှသေ့ယိုဖကျစီးယူ)
with Drunken Noodle (Sweet) (ထိုင်းဆန်ပြားခေါက်ဆွဲ) (အချို) (ထိုငျးဆနျပွားခေါကျဆှဲ) (အခြို)
N7. Kwy Tei Yw Pad Kee Mao (ကွေ့သယိုဖက်ကီးမောင်) (ကှသေ့ယိုဖကျကီးမောငျ)
With drunken noodle (Spicy) (ထိုင်းဆန်ပြားခေါက်ဆွဲ) (အစပ်) (ထိုငျးဆနျပွားခေါကျဆှဲ) (အစပျ)
N8. Pad Thai (ဖက်ထိုင်းခေါက်ဆွဲ)(ဖကျထိုငျးခေါကျဆှဲ)
(Thin Rice Noodle with Bean Spouts, Egg & Peanuts in Tamarid Sauce)
SO1. Original Tom Yam Soup (တုန်ယမ်းချဉ်စပ်ဟင်းချို)(တုနျယမျးခဉျြစပျဟငျးခြို)
Hot and sour soup prawns or seafood with mushrooms
SA3. Thai Crispy Catfish with Mango Salad (Yum Pla Duk Fu) (ငါးခူမွကြော်သုပ်)(ငါးခူမှကွျောသုပျ)
Deep-fried catfish with seasonal fruit dressing
SA6. Thai Grilled Pork Neck Salad (Moo Yang Nam Tok)(ဝက်ဂုတ်သားကင်သုပ်)(ဝကျဂုတျသားကငျသုပျ)
Spicy barbequed marinated pork salad with chili and mint leaves
SA1. Thai Green Papaya Salad (Som Tum) (ယိုးဒယားသဘောင်္သီးထောင်း)(ယိုးဒယားသင်ျဘောသီးထောငျး)
Spicy thai salad of papaya, tomatoes, beans and thai dressing
N9. Kwy Tei Yw Lad Na (ကွေ့သယိုလာ့နား) (ကှသေ့ယိုလာ့နား)
(Flat Rice Noodle or Crisy Egg Noodle with Vegetables & Brown Gravy) (ကွေ့သယိုကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ) (ကှသေ့ယိုကျောရညျခေါကျဆှဲ) (ဆန်ပြား (သို့) ဂျုံခေါက်ဆွဲအကြွပ်ကြော်)(ဆနျပွား (သို့) ဂြုံခေါကျဆှဲအကွှပျကွျော)
FR7. Steamed Rice (ထမင်းဖြူ)(ထမငျးဖွူ)
Steamed rice (ထမင်းဖြူ)
A16. Chicken Satay (ကြက်ဆာတေး)(ကွကျဆာတေး)
A1. Deep Fried Shrimp Pancakes with Sweet Chilli Sauce (ပုစွန်ပန်ကိတ်)(ပုစှနျပနျကိတျ)
A2. Thai-style Fish Cakes with Sweet Chilli Sauce (ထိုင်းငါးဖယ်ကြော်)(ထိုငျးငါးဖယျကွျော)
A3. Shrimp and Pork with Seaweed Topping (ဝက်ပုစွန်ရေညှိလိပ်)(ဝကျပုစှနျရညှေိလိပျ)
A4. Thai-style Fish Cakes Wrapped with Banana Leaf (ငါးဖယ်ဖက်ထုပ်)(ငါးဖယျဖကျထုပျ)
A5. Squid Tempura (ပြည်ကြီးငါးတန်ပူရာ)(ပွညျကွီးငါးတနျပူရာ)
A6. Money Bag (ကြက်သားငွေထုပ်)(ကွကျသားငှထေုပျ)
Mixed vegetables and chicken wrapped in crispy rice skin
A7. Crispy Shrimp Tempura (ပုစွန်တန်ပူရာ)(ပုစှနျတနျပူရာ)
A8. Crispy Fish Fingers (ငါးအသားချောင်းကြော်)(ငါးအသားခြောငျးကွျော)
A9. Deep Fried Pork Belly with Lemongrass (စပါးလင်သုံးထပ်သားအကြွပ်ကြော်) (စပါးလငျသုံးထပျသားအကွှပျကွျော)
A9. Chicken Skin with Lemongrass (စပါးလင်ကြက်ရေခွံအကြွပ်ကြော်)(စပါးလငျကွကျရခှေံအကွှပျကွျော)
A10.Fried Wonton (ဝက်ပုစွန်ဖက်ထုပ်ကြော်)(ဝကျပုစှနျဖကျထုပျကွျော)
A11. Vegetable Tempura (သီးရွက်စုံတန်ပူရာ)(သီးရှကျစုံတနျပူရာ)
A12. French Fried (အားလူးချောင်းကြော်)(အာလူးခြောငျးကွျော)
A13. Prawn Crackers (ထိုင်းပုစွန်မုန့်ကြွပ်ကြော်)(ထိုငျးပုစှနျမုနျ့ကွှပျကွျော)
A15. Grilled Pork Neck with Spicy Dip (ဝက်ဂုတ်သားကင်) (ဝကျဂုတျသားကငျ)
A17. Chicken Wings ကြက်တောင်ပံကြော် (ကွကျတောငျပံကွျော)
A18. Deep Fried Cashew Nuts သီဟိုဠ်စေ့ကြော် (သီဟိုဠျစကွေ့ျော)
A19. Cheese Stick
A20. Jalapeno Poppers ချိစ်ငရုပ်ပွကြော် (ခြိဈငရုပျပှကွျော)
SA2. Authentic Thai Larb Salad (ထိုင်းစတိုင်စင်းကောအစပ်သုပ်)(ထိုငျးစတိုငျစငျးကောအစပျသုပျ)
Thai spicy minced pork salad with dry chili and mint leaves
SA4. Spicy Shrimp Salad with Lemongrass and Mint (Pla Goong) (ပုစွန်ကင်သုပ်)(ပုစှနျကငျသုပျ)
SA5. Authentic Spicy Thai Squid Salad (Yum Pla Muk)(ပြည်ကြီးငါးချဉ်စပ်သုပ်)(ပွညျကွီးငါးခဉျြစပျသုပျ)
Sliced squid mixed with fresh salad inahot and sour dressing
SA7. Thai Grilled Pork Neck Paste (Moo Yang Nam Tok)(ဝက်ဂုတ်သားကင်ထောင်း)(ဝကျဂုတျသားကငျထောငျး)
SA8. Thai Style Chicken Slide Salad (ထိုင်းစတိုင်ကြက်သားပြားသုပ်)(ထိုငျးစတိုငျကွကျသားပွားသုပျ)
SA9. Thai Style Chicken Feet Salad (ထိုင်းစတိုင်ကြက်ခြေထောက်သုပ်)(ထိုင်းစတိုင်ကွကျခွထေောကျသုပျ)
SA10. Thai Style Carrot & Corn Salad (ပြောင်းဖူးစေ့ဥနီထောင်း)(ပွောငျးဖူးစေ့ဥနီထောငျး)
SA11. Authentic Thai Spicy Mixed Fruit Salad (ထိုင်းသစ်သီးစုံသုပ်)(ထိုငျးသဈသီးစုံသုပျ)
SA12. Thai Style Chicken Salad with Lemongrass (ထိုင်းစတိုင်စပါးလင်ကြက်သားသုပ်)(ထိုငျးစတိုငျစပါးလငျကွကျသားသုပျ)
SA13. Shrimp Salad with Kale (ပုဇွန်ကိုက်လန်သုပ်)(ပုဇှနျကိုကျလနျသုပျ)
SA14. Thai Style Prawn Salad with Eggplant (ပုစွန်ခရမ်းသီးထောင်း)(ပုစှနျခရမျးသီးထောငျး)
SO2. Tom Yam Nam Sai (တုန်ယမ်းနမ့်ဆိုင် - အုန်းနို့မပါ)(တုနျယမျးနမျ့ဆိုငျ - အုနျးနို့မပါ)
(Tom Yum withaClear Broth without Coconut Milk)
SO3. Tom Yam Pok Tek (တုန်ယမ်းပို့တဲ့ - ထိုင်းပင်လယ်စာဟင်းချို)(တုနျယမျးပို့တဲ့ - ထိုငျးပငျလယျစာဟငျးခြို)
(Tasty Tom Yam with Thai Herbs and Dry Chilli)
SO4. Tom Yum Ka Moo (တုန်ယမ်းဝက်လက်စွပ်ပြုတ်)(တုနျယမျးဝကျလကျစှပျပွုတျ)
(Hot & Spicy Pork Leg Soup)
SO5. Tom Kha Gai (Thai Coconut Chicken Soup) (ကြက်အုန်းနို့ဟင်းချို) (ကွကျအုနျးနို့ဟငျးခြို)
Creamy coconut soup with mushroom and thai herbs
SO6. Glass Noodle Soup with Tofu and Minced Pork (ဝက်ပဲကြာဇံဟင်းချို)(ဝကျပဲကွာဇံဟငျးခြို)
Clear glass noodle soup with minced pork and tofu
SO7. Fish Head Soup with Taro Served with Special Sauce (ပိန်းဥငါးခေါင်းဟင်းချို)(ပိနျးဥငါးခေါငျးဟငျးခြို)
SO8. Fish Soup with Plum (ငါးဆားငံစေ့ဟင်းရည်)(ငါးဆားငံစဟေ့ငျးရညျ)
Boiled fish with plum
SO9. Spicy Chicken Feet Soup (ထိုင်စတိုင်ကြက်ခြေထောက်ဟင်းချို)(ထိုငျစတိုငျကွကျခွထေောကျဟငျးခြို)
SO10. Hot and Sour Village Chicken Soup (ကြက်တောချဉ်စပ်ဟင်းရည်)(ကွကျတောခဉျြစပျဟငျးရညျ)
SO11. Southern Thai Style Hot & Spicy Chicken Soup with Turmeric ထိုင်းတောင်ပိုင်းကြက်နနွင်းတက်ဟင်းရည် (ထိုငျးတောငျပိုငျးကွကျနနှငျးတကျဟငျးရညျ)
SO12. Wonton Soup (ဝက်ပုဇွန်ဖက်ထုပ်ဟင်းချို)(ဝကျပုစှနျဖကျထုပျဟငျးခြို)
SF1. Crispy Fried Pork-leg (ဝက်လက်ပေါင်းအကြွပ်ကြော်)(ဝကျလကျပေါငျးအကွှပျကွျော)
SF2. Roasted Pork Belly with taro (၀က်သုံးထပ်သားပိန်းဥပေါင်း)(၀ကျသုံးထပျသားပိနျးဥပေါငျး)
SF3. Mutton Sizzling Stir-fried ‘Pad Cha’ (ဆိတ်သားအစပ်ဟော့ပလိတ်)(ဆိတျသားအစပျဟော့ပလိတျ)
SF3. Duck Stir-fried ‘Pad Cha’ (ဘဲပေါင်းဟော့ပလိတ်)(ဘဲပေါငျးဟော့ပလိတျ)
SF3. Seafood Sizzling Stir-fried 'Pad Cha' (ပင်လယ်စာဟော့ပလိတ်)(ပငျလယျစာဟော့ပလိတျ)
SF4. Steamed Duck (ဘဲပေါင်း)(ဘဲပေါငျး)
SF5. Stir-Fried Chicken with Taro Basket ကြက်ပိန်းဥပန်းခြင်း(ကွကျပိနျးဥပနျးခွငျး)
SF6. Red Wine Chicken Wings (ဝိုင်နီကြက်တောင်ပံ) (ဝိုငျနီကွကျတောငျပံ)
SF7. Roasted Pork Spare Ribs in Clay Pot (ဝက်နံရိုးကင်မြေအိုး)(ဝကျနံရိုးကငျမွအေိုး)
SF8. Glass Noodle with Prawn in Clay pot ပုဇွန်ပဲကြာဇံမြေအိုး (ပုဇှနျပဲကွာဇံမွအေိုး)
SF9. Stir-fried with Salted Chili (ထိုင်းစတိုင်ဆားငရုတ်ပွချက်)(ထိုငျးစတိုငျဆားငရုတျပှခကျြ)
Choose Chicken or Prawn
SF10. Stir-fried in Shrimp Paste (ထိုင်းစတိုင်ငပိကြော်)(ထိုငျးစတိုငျငပိကွျော)
Choose Chicken or Pork or Shrimp
SF11. Stir-fried Minced Pork with Black Egg and Basil (ဝက်စင်းကောဆေးဘဲဥချက်)(ဝကျစငျးကောဘဲဥခကျြ)
SF11. Stir-fried Minced Chicken with Black Egg and Basil (ကြက်စင်းကောဆေးဘဲဥချက်)(ကွကျစငျးကောဆေးဘဲဥခကျြ)
SF12. Thai Stir-fried Chili - "Pad Ped" (ဖက်ဖေ့ကြော်)(ဖကျဖကွေ့ျော)
SF13. Stir-fried with Ginger, Mushroom and Spring Onions (ဂျင်းနုမှိုကြော်)(ဂငျြးနုမှိုကွျော)
Choose Chicken or Pork
SF14. Stir-fried in Sweet & Sour Sauce with Pineapple (နာနတ်ချိုချဉ်ကြော်)(နာနတျခြိုခဉျြကွျော)
SF15. Stir-fried with Chilli, Onion and Thai Sweet Basil (ပင်စိမ်းကြော်)(ပငျစိမျးကွျော)
Choose your Chicken or Pork
SF16. Stir-fried with Cashew Nut and Spring Onion(သီဟိုဠ်စေ့ကြော်)(သီဟိုဠျစကွေ့ျော)
SF17. Stir-fried Slide with Garlic (ကြက်သွန်ဖြူမွှေး)(ကွကျသှနျဖွူမှေး)
Choose Chicken or Pork Slide
SF18. Chicken Stuffed Omelet (ကြက်သားအစာသွပ်ကြက်ဥကြော်)(ကွကျသားအစာသှပျကွကျဥကွျော)
SF18. Pork Stuffed Omelet (ဝက်သားအစာသွပ်ကြက်ဥကြော်)(ဝကျသားအစာသှပျကွကျဥကွျော)
SF18. Seafood Stuffed Omelet (ပင်လယ်စာအစာသွပ်ကြက်ဥကြော်)(ပငျလယျစာအစာသှပျကွကျဥကွျော)
SF19. Minced Omelet (စင်းကောကြက်ဥကြော်)(စငျးကောကွကျဥကွျော)
C1.Thai Thani Curry (ထိုင်းဌာနီကာရီချက်)(ထိုငျးဌာနီကာရီခကျြ)
C2. Southern Thai Gaeng Som with fish (ကန်စုန်းကာရီ)(ကနျစုနျးကာရီ)
Sour soup with fish and mixed vegetables
C2. Southern Thai Gaeng Som with meat (ကန်စုန်းကာရီ)(ကနျစုနျးကာရီ)
Sour soup with meat and mixed vegetables
C2. Southern Thai Gaeng Som with vegetable (ကန်စုန်းကာရီ)(ကနျစုနျးကာရီ)
Sour soup mixed vegetables
C3. Slow Braised Pork Leg (ဝက်လက်ကာရီ)(ဝကျလကျကာရီ)
C4. Slow Braised Mutton (ဆိတ်သားရေခမ်းချက်)(ဆိတျသားရခေမျးခကျြ)
C5.Curry Steamed Seafood (ခဲပတ်ပင်လယ်စာ)(ခဲပတျပငျလယျစာ)
C6.Mussaman Curry (မက်စမန်ကာရီ)(မကျစမနျကာရီ)
C7.Green Curry (အစိမ်းရောင်ကာရီ)(အစိမျးရောငျကာရီ)
C8. Red Curry (အနီရောင်ကာရီ) (အနီရောငျကာရီ)
S1. Prawn with Tamarind Sauce (ပုစွန်ကြော်မန်ကျည်းနှစ်ဆော့စ်)(ပုစှနျကွျောမနျကညျြးနှဈဆော့ဈ)
S2.Deep-fried Soft Crab with Garlic and Ground Pepper (ကြက်သွန်ဖြူ ငြုပ်ကောင်းဂဏန်းပျော့အကြွပ်ကြော်)(ကွကျသှနျဖွူ ငွုတျကောငျး ဂဏနျးပြော့အကွှပျကွျော)
S3. Crab Curry (ဂဏန်းမဆလာချက်)(ဂဏနျးမဆလာခကျြ)
S4. Deep-fried Squid with Garlic and Ground Pepper ( ကြက်သွန်ဖြူ ငြုပ်ကောင်းပြည်ကြီးငါးကြော်)( ကွကျသှနျဖွူ ငွုပျကောငျးပွညျကွီးငါးကွျော)
S5. Stir-fried Squid or Prawn with Thai Shrimp Paste (ပီးဖောင်ဆော့စ်နှင့် ပုစွန်ကြော် (သို့) ပြည်ကြီးငါးချက်)(ပီးဖောငျဆော့ဈနှငျ့ ပုစှနျကွျော (သို့) ပွညျကွီးငါးခကျြ)
S6. Steamed Squid with Lemon and Garlic ( ပြည်ကြီးငါးသံပုရာပေါင်း)( ပွညျကွီးငါးသံပုရာပေါငျး)
S6. Steamed Prawn with Lemon and Garlic (ပုဇွန်သံပုရာပေါင်း)( ပုဇှနျသံပုရာပေါငျး)
S7. Seafood Paradise
S8.Seafood Hot Plate (ပင်လယ်စာဟော့ပလိပ်)(ပငျလယျစာဟော့ပလိပျ)
S9. Stir-Fried Squid with Salted Egg (ပြည်ကြီးငါးနှင့်ဆေးဘဲဥချက်)(ပွညျကွီးငါးနှငျ့ဆေးဘဲဥခကျြ)
S10.Grilled Prawn (ပုဇွန်ကင်)(ပုဇှနျကငျ)
S11.Grilled Squid (ပြည်ကြီးငါးကင်)(ပွညျကွီးငါးကငျ)
F1. Steamed Fish with Lime and Garlic (ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ကကတစ်ငါးသံပုရာပေါင်း)(ခဉျြခဉျြစပျစပျကကတဈငါးသံပုရာပေါငျး)
F2. Steamed Fish in Soy Sauce (ကကတစ်ငါးပဲငံပြာရည်ပေါင်း)(ကကတဈငါးပဲငံပွာရညျပေါငျး)
F3. Steamed Fish with Plum Sauce (ကကတစ်ငါးဆားငံစေ့ပေါင်း) (ကကတဈငါးဆားငံစပေ့ေါငျး)
F4. Deep-fried Fish with Thai Sweet and Sour Sauce (ကကတစ်ငါးချိုချဉ်)(ကကတဈငါးခြိုခဉျြ)
F5. Deep-fried Fish with Soya Bean Paste (ကကတစ်ငါးနှင့် ပဲငါးပိအစပ်ကြော်ဆော့စ်)(ကကတဈငါးနှငျ့ ပဲငါးပိအစပျကွျောဆော့ဈ)
F6. Deep-fried Fish with Tamarind Sauce (ကကတစ်ငါးအကြွပ်ကြော်မန်ကျည်းနှစ်ဆော့စ်)(ကကတဈငါးအကွှပျကွျောမနျကညျြးနှဈဆော့ဈ)
F6. Deep-fried Served with Mango Salad (ကကတစ်ငါးအကြွပ်ကြော်နှင့်သရက်သီးသီဟိုစေ့သုပ်)(ကကတဈငါးအကွှပျကွျောနှငျ့သရကျသီးသီဟိုစသေု့ပျ)
F7.Thai Style Two Flavored Fish နှစ်မျိုးစားငါး (နှဈမြိုးစားငါး)
F9. Fish with Soya Bean Paste Salad (ကကတစ်ငါးနှင့် ပဲငါးပိဆော့စ်အစပ်သုပ်)(ကကတဈငါးနှငျ့ ပဲငါးပိဆော့ဈအစပျသုပျ)
V1. Stir-fried ဗsparagus with Prawn (ကညွတ်ပုဇွန်ကြော်)(ကညှတျပုဇှနျကွျော)
V2. Stir-fried morning glory with Oyster Sauce and Garlic (ထိုင်းစတိုင်ကန်စွန်းရွက်ခရုဆီကြော်)(ထိုငျးစတိုငျကနျစှနျးရှကျခရုဆီကွျော)
V3. Stir-fried mixed vegetable with garlic and oyster sauce (သီးရက်စုံကြော်)(သီးရကျစုံကွျော)
V4. Stir-fried eggplant with minced pork (ဝက်ခရမ်းသီးကြော်)(ဝကျခရမျးသီးကွျော)
V5. Stir-fried Bok Choi Sum with Garlic and Oyster Sauce (ကြက်သွန်ဖြူမုန်ညှင်းစိမ်းနှင့်ခရုဆီကြော်)(ကွကျသှနျဖွူမုနျညှငျးစိမျးနှငျ့ခရုဆီကွျော)
V6. Stir-fried Pork Belly with Chinese Kale (၀က်အကြွပ်ကိုက်လန်ကြော်)(ဝကျအကွှပျကိုကျလနျကွျော)
V7. Stir-fried Ladies's Fingers (ထိုင်စတိုင်းရုံးပတီသီးကြော်)(ထိုငျးစတိုင်ရုံးပတီသီးကွျော)
V8. Stir fried Bitter Gourd with egg ( ကြက်ဟင်းခါးသီးနှင့်ကြက်ဥကြော်)( ကွကျဟငျးခါးသီးနှငျ့ကွကျဥကွျော)
V9. Stir-fried sayate wish salted soya bean ( ဂေါ်ရခါးညွှန့်ကြော်)( ဂျေါရခါးညှနျ့ကွျော)
V10. Stir-fried spinach with garlic oyster sauce (ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကြော်နှင့်ကြက်သွန်ဖြူခရုဆီ) (ဟင်းနုနယ်ြရက်ြကြော်နွင့်ကြက်ြသန်ျဖူခရုဆီ
L1.Special Thai Fried Rice (စပါယ်ရှယ်ထိုင်းထမင်းကြော်)(စပါယျရှယျထိုငျးထမငျးကွျော)
L2. Thai Fried Rice (ထိုင်းထမင်းကြော်) (ထိုငျးထမငျးကွျော)
L3.Tom Yum Fried Rice (တုံယမ်းထမင်းကြော်)(တုံယမျးထမငျးကွျော)
L4. Pineapple Fried Rice (နာနတ်သီးထမင်းကြော်)(နာနတျသီးထမငျးကွျော)
L5. Stir Fried Sweet Basil with Chili & Rice (ထမင်းဖြူနှင့်ပင်စိမ်းကြော်)(ထမငျးဖွူနှငျ့ပငျစိမျးကွျော)
L6. Baked Rice with Chinese Sausage in Claypot (မြေအိုးထမင်းပေါင်း)(မွအေိုးထမငျးပေါငျး)
L7. Stir Fried Three Layer Pork with Prik Pao Sauce & Rice (ပီဖောင်ဝက်သုံးထပ်သားနှင့်ထမင်းဖြူ)(ပီဖောငျဝကျသုံးထပျသားနှငျ့ထမငျးဖွူ)
L8. Red Curry Stir-fry (ဖက်ဖိုင်ချက်နှင့်ထမင်းဖြူ)(ဖကျဖိုငျခကျြနှငျ့ထမငျးဖွူ)
L9. Grilled Marinated Pork Shoulder (ထမင်းဖြူနှင့် ဝက်ဂုတ်သားကင်)(ထမငျးဖွူနှငျ့ ဝကျဂုတျသားကငျ)
Served with spicy dressing with rice
L10. Rice with Stir Fried Meat with Garlic and Blackpepper (ထမင်းဖြူနှင့်ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်ကောင်း)
N2. Roasted Pork Rib Noodle (၀က်နံရိုးပေါင်းခေါက်ဆွဲ)(ဝကျနံရိုးပေါငျးခေါကျဆှဲ)
N3. Boat Noodle (လှေခေါက်ဆွဲ)(လှခေေါကျဆှဲ)
N4. Lao Noodle (လာအိုခေါက်ဆွဲ)(လာအိုခေါကျဆှဲ)
N5. Wonton Soup Noodle (ဖက်ထုပ်ခေါက်ဆွဲ)(ဖကျထုပျခေါကျဆှဲ)
With pork and prawn
N10. Su Ki Hang/Su Ki Num (ဆူကီပဲကြာဇံကြော်) (ဆူကီပဲကွာဇံကွျော) (or) (ဆူကီပဲကြာဇံအရည်) (ဆူကီပဲကွာဇံအရညျ)
Stir-fried Glass Noodle or Glass Noodle Soup with Vegetable Served with Special Sauce
C9.Num Prik Ka Pi (ထိုင်းပုဇွန်ငပိနှင့်တို့ စရာ)(ထိုငျးပုဇှနျငပိနှငျ့တို့စရာ)
Shrimp paste sauce served with vegetables
FR1. Thai Fried Rice (ထိုင်းထမင်းကြော်) (ထိုငျးထမငျးကွျော)
FR2.Tom Yum Fried Rice (တုံယမ်းထမင်းကြော်)(တုံယမျးထမငျးကွျော)
FR3.Special Thai Fried Rice (စပါယ်ရှယ်ထိုင်းထမင်းကြော်)(စပါယျရှယျထိုငျးထမငျးကွျော)
FR4. Pineapple Fried Rice (နာနတ်သီးထမင်းကြော်)(နာနတျသီးထမငျးကွျော)
FR5. Shrimp Paste Fried Rice (ပုဇွန်ငါးပိထမင်းကြော်)(ပုဇှနျငါးပိထမငျးကွျော)
FR6. Baked Rice with Chinese Sausage in Claypot (မြေအိုးထမင်းပေါင်း)(မွအေိုးထမငျးပေါငျး)